ဘာလင် မှစ. ယူပါရန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဘာလင် မှစ. ယူပါရန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 06/11/2020)
ဘာလင်မှကိုယ်တိုင်သွားရောက်လည်ပတ်ရန်စိတ်ကူးကောင်းသည့်နေရာဖြစ်သော်လည်းဘာလင်မှအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောနေ့ခရီးစဉ်များသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်! သငျသညျနေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားရန်ဂျာမနီမြို့တော်အလုံအလောက်ကြီးမြတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဘာလင်ကနေနေ့ကခရီးစဉ် အိမ်နီးချင်းမြို့များနှင့်ကျေးလက်လူအစုအဝေးအနေဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သက်သာပူဇော်နိုင်ပါတယ်မှ. မှ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘုံဗိမာန် နှင့် ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဥယျာဉ် Potsdam ၏မြစ်ချောင်းများ Havel နှင့် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့၏သဘာဝဘုန်းဖို့, ဘာလင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းလှမ်းမှုကို ဆွဲဆောင်မှု၏ပဒေသာ နှင့်အမှုအရာလုပ်ဖို့. မြို့တော် ရထားလမ်းနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကွန်ရက်များထွက်ခြင်းနှင့်အကြောင်းကိုရရှိရန်လွယ်ကူစေ, ဆန္ဒအလျောက်စီစဉ်ထားသောခရီးစဉ်များကနောက်ထပ်ခရီးသွားရန်လွယ်ကူစေသည်.
ဘာလင် မှစ. နေ့ခရီးစဉ်: Potsdam
ဘာလင်ကနေအဘယ်သူမျှမလွတ်မြောက်ထက်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိသွားတဲ့ Potsdam. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့များစာရင်းကိုရှိသည်မဟုတ်နိုင် တစ်ရက်ကမပါဘဲဘာလင်ကနေ trips. အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်း. အတွင်း 40 သင်တစ် ဦး အဘို့အလမ်းလျှောက်တဲ့နေ့အဘို့အမြို့ပြအတွက်ကုန်သွယ်ပါလိမ့်မယ် ဥယျာဉ်များ နှင့်ယခင်ဟောင်း Prussian တော်ဝင်မြို့တော်.
ယင်းကိုဦးတည်လှည့်လည် Potsdam ရန်သင့်တစ်နေ့တာခရီးစဉ်စတင်ပါ ဟောငျးဒတျချြရပ်ကွက်. Potsdam ဒတျချြရပ်ကွက်၏အနီရောင်အုတ်ဒတျချြစတိုင်ဗိသုကာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဂျာမနီမှာပေမယ့်ဥရောပသားအပေါင်းတို့၌မသာ. တောင်မှနယ်သာလန်နိုင်ငံ, Potsdam အတွက်ဇန်နဝါရီ Bouman 18 ရာစုဖန်တီးမှုကိုက်ညီသော outbuildings ရှာကြံမဖြစ်နိုင်ဘူး.
Dresden Potsdam မှရထား
Magdeburg Potsdam မှရထား
Hanover Potsdam မှရထား
ဘာလင် မှစ. နေ့ခရီးစဉ်: Muskau
လူအများစုဟာမှာထွက်ဆွဲထားအချိန်ဖြုန်းဖို့လာ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site ကို, Muskauer ပန်းခြံ သေးငယ်တဲ့ရေကန်ကဝိုင်းက၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အင်္ဂလိပ်ဥယျာဉ်နှင့် Neo-Renaissance ရဲတိုက်နှင့်အတူ. ဒီပန်းခြံနှင့်ပတ်သက်ပြီးအထူးတစ်ခုခုက၎င်း၏ပထဝီဖို့ကိုတိုးချဲ့ဖြစ်ပါသည် နှစ်ခုလုံး ဂျာမနီနဲ့ပိုလန်! ဒါကြောင့်ပန်းခြံကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်တဦးတည်းကိုပစ်ခတ်အတွက်နှစ်နိုင်ငံတစ်ဦးအလည်အပတ်ပါဝင်သည်. ကျနော်တို့ထိရောက်မှုကြိုက်တယ်! ဒီကနေဘေးဖယ်လုပ်ဖို့အများကြီးမရှိပါ, ဒါကြောင့်မကောင်းပါ Muskau တစ်ဦးအလည်အပတ်အကောင်းဆုံးမာရ်နတ်တံတားကဲ့သို့အခြားအနီးအနားမှာဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူတွဲနေသည်.
ဘာလင်မကောင်းပါ Maskau မှရထား
Dresden မှမကောင်းပါ Maskau မှရထား
Potsdam မကောင်းပါ Maskau မှရထား
Magdeburg မကောင်းပါ Maskau မှရထား
ဘာလင် မှစ. နေ့ခရီးစဉ်: Bremen
ရလား, ရလား! ငါသည်ဤတစ်ရက်ခရီးစဉ်အဖြစ်လမ်းပိုင်းတစ်နည်းနည်းသိ. သင်တို့မူကား, အဲဒီမှာပါပြီတစ်ချိန်က, ကျနော်တို့ကပယ်စွန့်ခွာနိုင်ဘူးသင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ပါလိမ့်မယ် ဘာလင်စာရင်းထဲမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်! Bremen အတွက်လုပ်ဖို့အမှုအရာတစ်ခုအတွက်ညစာရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည် တစ်လှေပေါ်တွင်ဘီယာဥယျာဉ်တော်, အဆိုပါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ထွက်ဆွဲထား Schnoorviertel, တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးလမ်းလျှောက် ၏ 100 မီတာရှည်လျားသော Bottcherstrasse, နှင့်မှာကော်ဖီနှင့်ကိတ်မုန့်နှင့်အတူလျှော့ပေါ့ တစ်ဦးလေရဟတ်စက်၏အခြေစိုက်စခန်း. သငျသညျကိုယျအဘို့ကိုယ်ရောစိတ်ပါတွေ့မြင်ကြပါပြီ!
ဘာလင် Bremen မှရထား
ဟမ်းဘတ် Bremen မှရထား
Bremen ရထားမှ Hanover
Potsdam Bremen မှရထား
Dresden ဘာလင်မှကြောက်မက်ဘွယ်သောနေ့ခရီးစဉ်စေသည်! အဆိုပါမြို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်နာရီဖြစ်ပါသည် ရထားနဲ့ ဂျာမန်မြို့တော်ကနေ. ဒါဟာတစ်ဝက်ဘာလင်နှင့်ပရာ့ဂ်အကြားတည်ရှိသည်, နှင့်သွားလာရန်အတော်လေးအသေးစားနှင့်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ပင်မယ့်တနေ့နှင့်တကွသင်အတော်လေးနည်းနည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းအဓိပ်ပာယျ.
အဆိုပါ Elbe မြစ် မြို့သူမြို့သားအပိုင်းသုံးပိုင်း; တဘက်တချက်၌ပေါ် Altstadt လည်းမရှိ (သို့မဟုတ် Old စီးတီး), နှင့်အခြားသောအပေါ်, အဆိုပါ Neustadt လည်းမရှိ (နယူးစီးတီး), ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ခန့်မှန်း, အဆိုပါ Altstadt အမှန်တကယ်အသစ်များဖြစ်ပါသည်!
Dresden WW2 ရဲ့အဆုံးမှာမြေပေါ်မှာဗုံးကြဲခဲ့သည် (သင်ဖတ်သေချာအောင် Slaughterhouse ငါးခု သငျသညျခရီးစဉ်မတိုင်မီ, သငျသညျသမိုငျးသို့လျှင်) ဒါဟာစစ်ပွဲမတိုင်မှီဖြစ်သကဲ့သို့နှင့် Altstadt ဧရိယာအတိအကျပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အဆောက်အဦးအချို့ပြီးမှသာပြီးစီးခဲ့ကြသည် 2000.
အခြို့သောကြီးစွာသောနေ့၌ခရီးစဉ်များအတွက်ဘာလင်ထဲကချိုးဖျက်ဖို့အဆင်သင့်? ၏အကူအညီနှင့်အတူရှိတစ်ဦးစီးနင်းကိုဖမ်း တစ်ဦးကရထား Save. အဆိုပါဝှက်ထားသောအဖိုးအခ, အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကို, ပဲပျော်စရာ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ခံထားရသောနေ့ဘာလင် မှစ. ယူပါရန် Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-from-berlin%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#BeyondBerlin Daytrips ခရီးသွား travelgermany ယူနက်စကို